सीता दिदीका हत्यारा !
यो कस्तो मानसिकता ?
हलो…! हलो…! हलो……!!, मामा ! म बोलेको नेपालबाट…॥ !
शेखरको मनमा चिसो पस्यो । अमृतको स्वर स्वाभाविक थिएन । हतास र अत्यासपूर्ण थियो । नेपालमा दैनिकरुपमा भइरहेको हत्या, हिंसा, आतंक, लुटपाट, अपहरण आदिको खवरले शेखर जस्ता परदेशमा बस्ने धेरै नेपाली चैनले सुत्न सक्दैनन् जसका परिवार नेपालमा छन् । उसले यस्तै सम्झियो पक्कै केही दूर्घटना भो कि क्या हो !
के भो भन…। भन…। छिटो भन ……॥ शेखर अत्तालिदै सोध्यो ।
मामा…।! मामा…॥! सीता दिदीलाई घर लान सकिएन !
किन के भो र सकिएन …… के भन्न खोजेको छिटो भन !
हामी उहाँलाई आर्यघाट लादैछौं मैले बाटोबाट फोन गरेको ।
अमृतको आवाज अवरुद्ध थियो । रोदन मिश्रित शव्दहरु उसका मुखबाट फुट्न सकिरहेका थिएनन् ।
शेखर चिच्यायो यो हुन सक्दैन । कसरी भो यो सबै यति चाडै…… हे परमेश्वर …॥के गरिस तैले …। कति निर्दयी छस् त !
हो मामा यथार्थ यही हो । हामीले बचाउन सकेनौ । आज उहाँलाई हामी अन्तिम विदाई गर्न वाध्य भयौ । बडो कष्ठसाथ त्यति भनेर अमृतले फोन राखिदियो ।
जीवनमा धेरै उतारचढाव र दुखका खेलहरु झेलेर आठ नौ वर्षदेखि दशदेश दूर परदेशमा रहेको शेखरले सीता दिदीको त्यो अपत्यारिलो मृत्युलाई सहजरुपमा लिन सकेन । जीवनमा पहिलोपटक सपना साँचो भएको महशूस उसले गर्‍यो । गए राती नराम्रो सपना देखेको कुरा त्यतिबेला सम्झियो जतिबेला सीता दिदीको मृत्युको खबर उसले भान्जाबाट पहिलो पटक पायो ।
आफ्नै बाबुलाई वर्षौ देख्नै नपाई दुइ वर्ष अघि परदेशमै बाबुको काजकि्रया गर्न वाध्य भएको शेखरले बाबुभन्दा केही महिना अघिमात्र आफ्नै सासुलाई गुमाएको थियो । यो बीचमा उसले काका, ठूलाबा तथा नातेदारहरु गरेर धरै गुमाइसकेको थियो । परदेशमा रहनु पर्दाको यो पीडाबाट छटपटीरहेको शेखरका लागि सीता दिदीको मृत्यु सबैभन्दा भयानक लाग्यो । बुबा र सासु धेरै वर्षदेखि विरामी हुनुहुन्थ्यो । उमेर पनि पचहत्तर नाघिसकेका भए पनि पाँच सात वर्ष देख्नै नपाई आफ्ना पि्रयजनलाई विदाई गर्नु पर्दाको पीडा कति दुखदायक हुन्छ त्यो पनि उ सहन र समन गर्न बाध्य थियो ।
तर सीतादिदी त भरखरै बाउन्न त्रिपन्न वर्षकी मान्छे ! पढेलेखेकी मान्छे ! आजभन्दा करीव पच्चीस वर्ष अघि एम. कम. पास गरेकी मान्छे !, त्यो जमानामा नेपालका पढेलेखेका नारीहरुमध्ये औलामा गनिने मान्छे ! नेपालको ठूलो बैंक मध्येमा पर्ने कृषि विकास बैंकको प्रथम श्रेणीको अधिकृतसम्म भएर भरखरै रिटायर्ड भएकी मान्छे ! छ बैनी छोरीहरु मध्ये सबैभन्दा साहसिली छोरी । दुष्ट मानसिकता भएका आफन्तहरुबाट घरमा छोरा तथा भाइ नहुँदाको पीडा भोग्न वाध्य भएता पनि एउटा सुसंस्कृत परिवारी छोरी ! अल्पायुमा भएको आफ्ना बाबुको निधन र छोरीछोरी मात्र हुंदाको अवस्थाले आफन्तहरुबाट सताइए पनि अत्यन्त साहस लिएर अधि बढेकी छोरी सीता दिदी !
शेखर यस्तै यस्तै कुराहरु सोचिरहन्छ सीता दिदीका बारेमा । सीता दिदीको मृत्युलाई उसले स्वाभाविक मान्न सकिरहेको छैन । उ पत्याइरहेको छैन ।
दुइ घण्टा पछि जोसनाको फोन आयो हाकिम के गर्न सीता दिदीलाई बचाउने धेरै प्रयत्न गरियो तर सकिएन । जोसनको बोली स्पष्ट थिएन । बोलीमा बोलीभन्दा पनि वेदना थियो । घुक्कघुक्क र सुक्कसुक्कको आवाज बढी थियो ।
म पछि फोन गर्छु हाकिम…॥! र अहिले घरमा फोन नगर्नु दिदीहरु झन् रुनुहुन्छ । जोसनाले धेरै कुरा गर्न सकिनन् ।
जोसनलाई पनि केही बर्षअघिदेखि आमाको अभाव खड्किएको । त्यसमाथि आफ्नो सबैभन्दा नजिकाको साथी श्रीमान् परदेशमा ! त्यसमाथि अचानक माहिली दिदीको मृत्यु ! जोसनलाई जीवनमा कताकता आँधीतुफान आएर सबै भताभुंग बनाउन खोजिरहेछ जस्तो लागिरेको छ । उसले फोनमा भनेकी थिइ अब दिदीहरु के गर्ने होला ! सीता दिदी ठूलो साहस हुनुहुन्थ्यो घरको !
सीता दिदी अरु दिदीहरु भन्दा अलि झोक्की र रिसाहा भए पनि उसको सोझो पनलाई साहै माया गर्थी र बेलाबेलामा शेखरलाई भन्थी के गर्नु सीता दिदी साह्रै सोझो छ एकहोरो छ भनेको मान्दैन र त साखुल्ले पल्टेर भए नभएका उल्टापाल्टा कुरा सुनाएर एकहोर्याएर आफ्नो दुनो सोझो गरिरहेका छन् । शेखरले पनि सोच्यो ुयस्तो अपराध सायद यो दुनियाँमा कसैले गर्दैनन् होला ! शेखर अझ अबरुद्ध भयो । राजनलाई फोन गरेर काममा बोलायो र कामबाट विदा लियो ।
बग्दा बग्दैको नदी रोकिए जस्तो ! उड्दा उड्दैको चरा आकासबाट खसे जस्तो ! हेर्दाहेर्दैको एउटा रमणीय हिमाल सम्पूर्ण ढले जस्तो ! आफ! उभिएको धरातल भासिए जस्तो ! आकाशगंगा आगो लागेर खरानी भए जस्तो ! कस्तो कस्तो लाग्यो शेखरलाई ! हो बाबुको मृत्युको खबरले उ ज्यादै दःखी भएको थियो र त्यति असहज भएको थिएन जति सीता दिदीको मृत्युको खबरले उ भयो ।
सीता दिदीले अर्को ज्वाईको तुलनामा शेखरलाई त्यति नजिकको नठाने पनि उसले सीता दिदीलाई कहिल्ये टाढाको व्यवहार गरेन । उसालाई विश्वास थियो सीता दिदीको आँखा एकदिन खुल्छन् । जोसना पनि शेखरलाई यसै भन्थिन हेरिराख्नु हाकिम मान्छे हो एकदिन त आँखा खुलिहाल्छ नि । मान्छेको छाला ओढेको मान्छे जस्तो देखिने मान्छे र मान्छेमा फरक त मान्छेले पत्ता लाउन सकिहाल्छ नि । सीता दिदी पनि त मान्छे हो । शेखरले सोच्यो वास्तवमा जसले अरुलाई विश्वास गर्छ त्यो नै मान्छे हो र विश्वासघात गर्ने कुमान्छे हो । मान्छे र कुमान्छेबीचको पहिलो फरका पनि विश्वास र विश्वासघात नै हो । मान्छेले यो संसारमा लुकाउने नै के छ र ! कुनै न कुनै रुपमा कही न कही मान्छेको नाङ्गो र सक्कलीरुप मान्छेले देख्छ नै । कसैले नदेखे पनि लोग्नेले स्वास्नीको र स्वास्नीले लोग्नेको नाङ्गोरुप त देख्छ नै । अरुले नचिने पनि लोग्नेले स्वास्नी र स्वास्नीले लोग्ने त चिन्छ नै ।
तर जतिखेर सीता दिदीका आँखा खुले त्यतिखेरसम्म ढिला भइसकेको थियो । सीता दिदीलाई मानसिक र शारीरिक रोगले निकै चापिसकेको थियो । मानसिक सन्ताप सबैभन्दा ठूलो रोगको रुपमा सीता दिदीभित्र गाँजिइरहेको थियो । धेरै वर्षपछि पोहरसाल शेखरलाई भेट्दा सीता दिदीले कोठामा एक्लै पारेर टिलपिल आँशुले भरिएका आँखा मिच्दै भनेको कुराले अहिले उसलाई केही मान्छेसँग यति घृणा हुन थालेको छ त्यतिको घृणित मान्छे अरु कसैको कोही छैन र हुदैन पनि होला संसारमा !
ज्वाइँ मैले मान्छे चिन्न सकिनछु सकुनीहरु त आफ्नो मान्छे भएर घरमै आउँदो रहेछ । चोर र फटाह चिन्न गाह्रो हुदोरहेछ । अब म यो घरबाट कहिल्यै बाहिर जान्न । यस्तो भन्ने सीता दिदी अन्तत सदाका लागि जानु भो । शेखरले कहिल्यै सोचेको थिएन सीता दिदीले कुनै दिन यस्तो कुरा मसँग गर्नुहुन्छ भनेर । सधैं उनीहरुले शेखरका बारेमा नभएका नकारात्मक कुरामात्र कथुरी रहन्थे । मन्थरा र सकुनीले जस्तो उसका विरुद्ध षडयन्त्रमात्र गरिरहन्थे तर त्यो षडयन्त्र शेखर हैन सीताका विरुद्ध भइरहेको थियो । सीता दिदीले त्यो कहिल्यै बुझ्नु भएन ।
अहिले शेखरको कानमा सीता दीदीको मलिन त्यो आवाज गुन्जिरहेको छ । आँखामा सीता दिदीको त्यो पश्चातापपूर्ण अनुहार झल्झली आइरहेको छ । मस्तिष्कमा सीता दिदीको निष्कपटता अनि नारीसुलभ सोझोपन खेलिरहेको छ । शेखर भित्रभित्रै मुरमुरिन्छ दाह्रा किट्छ मुठ्ठी बटार्छ र भन्छ ूपापीहरु तिमीहरुले सीता दिदीको हत्या गर्यौ ! तिमीहरुनै सीता दिदीका हत्यारा हौ । तिमीहरुले गरेको अपमान अपहेलना र धोकाले सीता दिदीको साहस टुटायौ । निर्वल बनायाै लाचार बानायौं र मृत्युको मुखमा हाल्यौ । उपचार गर्न पनि विमुख गरायौ ।
सीता दिदी साह्रै साहासी हुनुहुन्थ्यो । आँटी हुनुहुन्थ्यो । नाजायज कुरामा कसैसँग कहिल्यै झुक्नुहुन्थ्यो । अरु दिदीबहिनी र आमा पनि सीता दिदीसँग डराउनु हुन्थ्यो । तर जालीको जालमा फसेपछि सीता दिदीको आँत कमजोर भइसकेको रहेछ । चंगुलमा फसेको माछो जस्तो भित्रभित्रै छट्पटिइरहनु भएको रहेछ । भनौ कसलाई भनौ घरको पीडा नभनौ कति सहुँ एउटा स्वाभिमानी मान्छेमाथि भएको मानसिक यातना । यो कुरा सबै शेखरले त्यही दिन मात्र खुलस्त थाह पायो । अरु पनि धेरै कुराहरु भन्ने इच्छा सीता दिदीलाई थियो होला तर अनुकुलता परेन । धेरै कुराहरु बाँकी र थाँति राखेर जान!भो !
शेखरले यो कुरा जोसनलाई पनि भनेको थिएन । शेखर सीता दिदीको संघर्ष र त्यागलाई सम्झन्छ । दाजुभाइ नभएको घरमा दिदीबहिनीहरु जस्तै दिदीबहिनीका लागि दुःख गरेर पढेको र अविवाहित बसेको । एम। कम। पढ्न बसन्तपुरदेखि किर्तिपुरसम्म पुसमाघ असारसाउन नभनी पैदले हिडेर जाने आउने गरेको । जागिर खादै पढ्दै त्यहाँसम्म गरेर तीसौं वर्षको लामो जागिरे जीवन पछि सुख गर्छु भन्ने बेलामा भएको उहाँको असहज अप्रत्यासित अस्वाभाविक र असामयिक मृत्युको जिम्मेवार अरु कोही हैन सीता दिदीले भनेका ।शकुनीहरु नै हुन । हरेक शव्दमा हाँ हाँ र जालमा ताल मिलाउने मन्थरा चरित्रहरु नै हुन । जुत्ता लाउनेलाई थाह हुन्छ जुत्ताले खुट्टा कहाँनिर खान्छ भनेर पढेलेखेर अलिकति ज्ञान आर्जन गर्नेलाई मात्र थाह हुन्छ कि पढ्न लेख्न कति गाह्रो छ भनेर । तर ति शकुनी जस्ता पात्रलाई के थाह यि सब कुरा ! शकुनी चरित्र अर्कालाई पीडा दिनु र अरुको दुखमा रमाउनु हो । यस्तै यस्तै कुराले शेखरको मनमा अहिले डेरा जमाएको छ ।
सम्पत्ति खानु थियो खाएको भए हुन्थ्यो तर सीता दिदीको अबला सोझो र एकहोरोपनको भरमार फाइदा उठाएर बहक्याउनु कतिसम्म नीचता हो हुनत घरमा सबैले उसको चलामाला बुझिसेककेका थिए तर छोरीको मायाले आमा पनि चुप लाग्नु हुन्थ्यो र बहिनीले दुःख पाउँछे भनेर दिदीहरु पनि । तर उसले उनीहरुको संयमतालाई आफ्नी स्वास्नी मार्फत उपयोग गरिहर्यो । शेखर यी कुराहरु जति सम्झन्छ त्यति मुरमुरिन्छ ।
शेखरले आफू परदेशिनु अधि नै भनेको थियो सीता दिदी तपाइँ अलि दुव्लाउँदै गए जस्तो छ एक पटक डाक्टरलाई जचाउँनु । तर त्यसको प्रतिवादमा सीता दिदीलाई उल्टो बहकाए । सायद शेखरलाई समेत दोषी बनाए नजर लायो भनेर । डाक्टरकहाँ गएर केही हुदैन दिदी बोक्सीको आँखा लागेको हो । फलानी बोक्सी हो चिलानी यस्ती हो । फालानो बोक्सो हो त्यसको नजरमा हेर्नु हुदैन । त्योसँग बोल्नु हुदैन । धामीझाँक्री झारफुक भाकल तन्त्रमन्त्र आदिमा सीता दिदीलाई घुमाउने बहकाउने काम वर्षैवर्ष गरिरहेछ । आमा दिदीहरुले कति भन्दा पनि सीता दिदी मान्नु भएन सपेराको मोहनीमा फसेको नागजस्तो सीता दिदी उनीहरुले भनेको हरेक कुरामा टाउको हल्लाइरहनु भो । यस्तो पढेलेखेको भएर पनि के भएको होला सीता दिदीलाई सबैले यसै भन्थे ।
सीता दिदी रिटायर्ड हुदाँ आएको एकमुष्ठ तीस पैतीसलाख ! त्यो पैसाले संगसंगै दुइटा घर बने । एउटा भाडामा लाग्यो । अर्कोमा सीता दिदी आमा र आफ्ना अरु दिदीबहिनी छोडेर उतै सर्नु भो । बुढी भएकी आमालाई त्यो कुराले गहिरो असर पार्यो र आमा थलिनु भो । त्यो कुरा अरु दिदीबहिनीले बुझेका थिए तर बुझ्नु पर्ने ले नबुझे पछि के नै लाग्दो रहेछ र ! सीता दिदी अन्धो हुनु भो ।
नयाँ घरमा आज, भोली, पर्सी गर्दै दिन वित्दै गए । सीता दिदी अब उसलाई बोझ हुन थाल्यो । उ सीता दिदीका अगाडि नांगिदै गयो । दिनभर रत्नपार्क तिर चाहर्ने र पीपलबोटमा टुक्रुक्क बसेर सित्तैमा पत्रिका हेरेर त्यसैको भरमा घर आएर डिंग हान्ने गरेको भेद पनि सीता दिदीको ज्ञानचक्षामा खुल्दै गयो । सडकमा ढुङ्गा हान्न गएर आज यस्तो भो आज उस्तो भो भन्दै कहिले दरबारको मान्छे त कहिले सीआइडी विभागको हँ भन्ने मान्छे जब दिनभर विना काम न काज घरमा कुचो लाएर बसेको देखेपछि मात्र सीता दिदीलाई थाह भो म कस्तो मान्छेको फेला परेछु भनेर ! आफैंलाई हप्काइ दप्काइ गर्दा पनि लोग्नेलाई संसारको अलेक्जेन्डर द ग्रेट जस्तो देखाउन सधैं हो मा हो भन्ने बहिनीप्रति पनि सीता दिदीको आँखा अलि उधि्रयो । यो त ………मान्छे होइन रहेछ ।
आज अलिकति ! भोली अलिकति ! पर्सी अलिकति गर्दै गर्दै जब उसले आफ्नो असली चरित्र पुरै देखायो सीता दिदी उसँग बस्न नसकेर फर्किने निधो गर्नु भो तर त्यतिबेलासम्म आमा वितिसक्नु भएको थियो र सीता दिदी आफैका लागि पनि ढिलो भै सकेको थियो । आमा वित्दा पनि उसले खासै वास्ता गरेन । उसबाट कुनै साहनुभूति वा समवेदना चूहिएन । गोहीको जतिपनि आँशु चुहाउन नसक्ने त्यो मान्छे जस्तो देखिने मान्छेले । सायद उ सीता दिदीको पनि कामना गरिरहेको हुनसक्छ जति छिटो सीता दिदी ………… त्यति चाँडो यो घर……॥ !उसलाई साइनो मानवियता र कर्तव्यपरायणता भन्दा पनि घरसँगको साइनो दह्रो बनाउनु थियो । उ त्यो घरमा भित्रिए पछि मान्छेसँगको अरु साइनोलाई उसले तोडिदियो ।
Mramik..... ! Seems like real tragedy... wow !
WOW !!! Shiva Daju, Good One.
शिवजी, मलाई यो कथाको वर्णन शैली अत्यन्त अस्पष्ट लाग्यो। कथानकमाभन्दा पनि पात्रहरुको स्वभावलाई बयान गर्नमा समय बढी खर्चिएको छ। कथाको विषयवस्तु सामाजिक र सामयिक हुँदा-हुँदै पनि नवीनता भने पटक्कै छैन।
छुचो मुख, खोलिहालें, माफ पाऊँ!
आधी पढें। पछे जती त राम्रो लाग्यो। हुन त गुदी आउन बांकी नै छ। अनी बसन्त जी जसरी नै बहश गरुला।
कस्तो नकचरो लोग्ने रहेछ ।
कथाको निस्कर्ष्: विवाह कानूनी बेस्स्याबृत्ती, पुरुष र महिला दुबैको लागि
मार्मिक कथा ।
सबै साथीहरूलाइ धन्यवाद ।
वसन्तजीले भनेको कुरालाइ अस्विकार गर्दिन तर यो पात्र प्रधानता कथा हो । साहित्य सिर्जना भनेको एउटै शैली, ढाचा र फ्रेमभित्र बसेर नै गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा मेरो पूर्ण सहमती नभएको हुँदा कथालाइ कथानक, विचार प्रधान वा पात्र प्रधानका रूपमा छोड्रनु पर्छ जस्तो लाग्छ । पात्र प्रधानभन्दा पनि चरित्र प्रधान भन्छु म । हो सबल लेखन गाह्रो छ मैले अझै धेरै मेहनत गर्नु पर्छ । "संसारमा यति धेरैर् अनुहार छन् तर किन एक अर्कासंग मिल्दैनन् ? साहित्य पनि त्यही हो, मान्छेको अनुहार जस्तै" भन्ने
मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो, साहित्य लेखनका बारेमा । यो संसारमा मान्छे अनुरहारले नराम्रा होलान् तर विचारले राम्रा हुन सक्छन्, अनुहारले राम्रा होलान् तर विचारले नराम्रा हुन सक्कन् । साहित्य लेखन पनि यस्तै यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ है, साथीहरू ।
धन्यवाद साथीहरू ! सबैको सुझाब शिराधार्य छ । नमस्ते ।
बसन्तजीले के भन्न खोज्नु भएको हो ? म पनि पछि कुरा गरौला, तर कथाले मर्म बोकेको छ । कथाकारको कुरासँग सहमत छु । हो मान्छेको अनुहार जस्तै सिर्जना पनि फरक हुन सक्छन ।
शिवजी र Anonymousजी; सृजनाको शैली मान्छे अनुसार केहि फरक हुनु स्वाभाविक हो भन्ने कुरासंग म पनि शत-प्रतिशत सहमत छु। मान्छे अनुसार अनुहार फरक हुन्छ त्यो साँचो हो तर अनुहारमा कहाँ के हुने र कुन भागको आधारभूत आकार कस्तो हुने भन्ने कुरा भने फरक नहोला।
यो कथाको वर्णन शैली, प्रस्तुति शैली अलिक अष्पष्ट र अप्ठेरो लागेकोले प्रतिकृया दिएको हुँ। अरु कहि होईन।
Anonymous, खुल्लामन्च,Basanta, Luna,एकलकाटे, पुष्प,नेपालियनजी सबैलाई धन्यवाद । वास्तवमा केही पाठकहरुले अनुमान गरेजस्तो यो कथा मात्र हैन वास्तविकता पनि हो त्यसैले..... पात्रहरुलाई खुलस्त गर्न नसक्नुको कारण पनि त्यही हो त्यसैले अलि जटिल भयो होला तर पनि पत्ता लाउन गाह्रो सायद छैन किनभने धेरै पात्र पनि त छैनन् । पुन धन्यवाद तथा परिपंच साधुवाद !